၁၆ ရက်နောက်ပိုင်း မိုးကြီးရေလျှံ၊ စိုးရိမ်ရေအမှတ် စသည်တို့အတွက် မိုးလေဝသ ထုတ်ပြန်ချက်များ - Top Cele News
၁၆ ရက်နောက်ပိုင်း မိုးကြီးရေလျှံ၊ စိုးရိမ်ရေအမှတ် စသည်တို့အတွက် မိုးလေဝသ ထုတ်ပြန်ချက်များ
Team Ag · Posted on June 16, 2021
ငပလီ သံတွဲ တောင်ကုတ်မှာ မိုးကြီးရေလျှံနိုင် ယနေ့မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်များ – 16/06/2021 နေ့ ဂွ ကျိန္တလိ ငပလီ သံတွဲ တောင်ကုတ်
မိုးကြီးရေလျှံဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 16/06/2021at 7:00am မော်တင် ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်း ဟိုင်းကြီးကျွန်း မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ် – su su san.
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၆)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေအားကောင်း ရာမှ အားအလွန်ကောင်းနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက် – စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတွင် နေရာကွက်ကျား၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့်ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား
မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ဒေသအလိုက်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက် လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် (၃၅)မိုင်မှ မိုင်(၄၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။
လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၈)ပေမှ (၁၂)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးဆက်လက် ပိုနေမည်။
နေပြည်တော်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ မိုးအသင့်အတင့် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်။
ငပလီ သံတှဲ တောငျကုတျမှာ မိုးကွီးရလြှေံနိုငျ ယနမေို့းလဝေသ ခနျ့မှနျးခကျြမြား – 16/06/2021 နေ့ ဂှ ကြိန်တလိ ငပလီ သံတှဲ တောငျကုတျ
မိုးကွီးရလြှေံဖွဈနိုငျပါတယျ။ 16/06/2021at 7:00am မျောတငျ ဂျေါရငျဂြီကြှနျး ဟိုငျးကွီးကြှနျး မိုးကွီးနိုငျပါတယျ။ ခရကျဒဈ – su su san.
(၂၀၂၁ ခုနှဈ၊ ဇှနျလ (၁၆)ရကျနေ့ နံနကျ(၇:၀၀)နာရီအခြိနျ ထုတျပွနျခကျြ)
ဘင်ျဂလားပငျလယျအျော အခွအေနေ။ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျနှငျ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတို့တှငျ မုတျသုံလအေားကောငျး ရာမှ အားအလှနျကောငျးနပေါသညျ။ ယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ – စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအောကျပိုငျးတှငျ နရောကှကျကြား၊
စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအထကျပိုငျး၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊မကှေးတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျပိုငျး)တို့တှငျ နရောကြဲကြဲ၊ ကခငျြပွညျနယျနှငျ့ ကယားပွညျနယျတို့တှငျ နရောစိပျစိပျနှငျ့ကနျြတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျတို့တှငျ နရောအနှံ့အပွား
မိုးထဈခြုနျးရှာပွီး၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့တှငျ ဒသေအလိုကျနှငျ့ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီးတို့တှငျ နရောကှကျ၍ မိုးကွီးနိုငျပါသညျ။ ရှာရနျရာနှုနျးပွညျ့ ဖွဈပါသညျ။
မွနျမာ့ပငျလယျပွငျ။ မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျ တို့တှငျ တဈခါတဈရံ မိုးသကျ လပွေငျးမြားကရြောကျပွီး လှိုငျးကွီးနိုငျပါသညျ။ မိုးသကျလပွေငျးကစြဉျ ရပွေငျ/မွပွေငျလသေညျ တဈနာရီလြှငျ (၃၅)မိုငျမှ မိုငျ(၄၀)အထိ တိုကျခတျနိုငျပါသညျ။
လှိုငျးအမွငျ့မှာ မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတို့တှငျ (၈)ပမှေ (၁၂)ပခေနျ့ ရှိနိုငျပါသညျ။ နောကျ(၂)ရကျအတှကျခနျ့မှနျးခကျြ။ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့တှငျ မိုးဆကျလကျ ပိုနမေညျ။
နပွေညျတျောနှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ။ မိုးတဈကွိမျ၊ နှဈကွိမျ ထဈခြုနျးရှာမညျ။ ရှာရနျရာနှုနျးပွညျ့ ဖွဈပါသညျ။ ရနျကုနျမွို့နှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျယနညေ့နအေထိခနျ့မှနျးခကျြ။ မိုးအသငျ့အတငျ့ ထဈခြုနျးရှာမညျ။ ရှာရနျရာနှုနျးပွညျ့ ဖွဈပါသညျ။